रुसको अत्याधुनिक फाइटर विमान सिरिया इन्ट्री, अमेरिकी सेनालाई खतरा ! « तात्तातो खबर
रुसको अत्याधुनिक फाइटर विमान सिरिया इन्ट्री, अमेरिकी सेनालाई खतरा !
फागुन १४, काठमाण्डौं । रूसले सिरियामा अत्याधुनिक फाइटर जेट पठाएको अमेरिकी सैन्य अधिकारीले बताएका छन् ।
यसले सिरियामा काम गरिरहेका अमेरिकी सेनाका लागि खतरा बढेको बताइएको छ । सु–५७ मस्कोको सर्वा्धिक परिष्कृत सैन्य जेट हो र यसमा गोप्य (स्टिल्थ) क्षमता पनि रहेको छ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सिरियामा आफ्नो सेनाको उपस्थितिलाई कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए बाबजुद रूसको यो कदम आएको हो ।
सिरिया समर्थित सेनाले अमेरिका समर्थित बलमाथि फेब्रुअरी ७ मा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अत्याधुनिक फाइटर जेट एफ–२२ परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछिको अवस्थामा रूसको यस्तो कदम आएको हो ।
सिरियामा अमेरिकी सेना र उसका गठबन्धनले अखडा बनाएर बसेको ठाउँमा भएको आक्रमणमा शासक समर्थित ५ सय सेना संलग्न भएको अनुमान अमेरिकी अधिकारीहरूको छ ।
डिसेम्बरमा दुईवटा एफ–२२ ले दुई रूसी एयरक्राफ्टलाई पछ्याएको थियो । अमेरिकी जेटले रूसी र अमेरिकी जेट आमने–सामने भएको समयमा चेतावनी समेत जारी गरेको थियो ।
रूसले सिरियाको मिमिनमा जेटका लागि आधार शिविर बनाएको अमेरिकी सैन्य अधिकारीले बताएका छन् । ‘सिरियामा पाँचौं पुस्ताको फाइटरको उपस्थितिले सिरियाबाट सेना फिर्ता हुने पतिबद्धता पूरा भएको छैन’, पेन्टागनका प्रवक्ता एड्रियन राङ्किन ग्यालेवेले बताए ।
अत्याधुनिक रूसी फाइटरको परिचालनलाई अमेरिकी एफ–२२ परिचालनको प्रतिकारका रूपमा उतारिएको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
रूसले सिरियाली थिएटरलाई नयाँ विमानको परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसरका रूपमा पनि लिइएको हुन सक्ने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । सु–५७ स्टिल्थ (राडार पत्ता लगाउन नसक्ने गोप्य) प्रविधि प्रयोग गर्ने पहिलो रूसी फाइटर जेट हो ।
यो विमानलाई हवाई र स्थल आक्रमण गर्ने किसिमबाट बनाइएको हो । रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो फाइटर विमान यसै वर्षदेखि रूसी सेनामा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । रूसी सरकारले शुरुमा १२ सय किसिमका विमानको अर्डर गरेको थियो । एजेन्सी